Shiinaha Runjin © Krunt ™ -4000 Soo saarista Mashiinka Mashiinka iyo Warshadda | Runchen
Runjin © Krunt ™ -4000 Mashiinka Isku Darka Miro
Ku rid guntanka miraha la qalajiyey, granule sonkor ama dareeraha dareeraha ku jira jalaatada.
Mootadu waxay wadaa darawal tiro si ay u gudbiso granules. Ku darida granule-ka jalaatada si hufan oo xasilloon leh bamka vane, ka dibna ku qas qasacadleyda iyo jalaatada slurry-ka ee isku-darka isku-darka xawaaraha joogtada ah. Bamka quudinta Vane waxaa lagu hagaajiyaa mitirka dhererka.
MirahaTM-4000 waa quudiyaha miraha granule gebi ahaanba dabooli kara baahida nadaafadda cuntada .Qalabku wuxuu ka kooban yahay qaybo tayo sare leh qaabkiisuna wuxuu la kulmi karaa heer nadaafadeed oo adag, isku halayn iyo adkeysi. Dhammaan qeybaha la xiriiri doona granule-jalaatada waxaa laga sameeyaa 304 bir bir ah .Waxaa jira dhalooyin ku rakiban qalabka cagta, kaas oo sahlanaan kara dhaqaajinta iyo rakibidda.
Koobka Hopper Iyo Tirada
Si loo hubiyo in furitaanka quudku uu quudin karo granule deggan, qalabka isku dhafka ah ayaa lagu rakibay buunshaha. xawaaraha fur fur tiro laga beddeli karaa 0% in 100%.
Mashiinka Quudinta ee Vane
Mashiinka quudinta Vane wuxuu ka kooban yahay giraangiraha baabuurka ee daabku. Waxay isku qasan kartaa granules si isku mid ah miraha jalaatada ah ee mashiinka dhaxanta joogtada ah .Hormarka wareegga gaashaanku wuxuu xirayaa albaabka miraha miraha, kaas oo go'doomin karaya jalaatada iyo hawo. waxay ku laaban doontaa wadista giraangiraha si otomaatig ah waxayna hoos u dhigeysaa jalaatada jalaatada. Xeerarka stepless waxaa loo samayn karaa xawaaraha socodka ee giraangiraha baabuurta iyada oo loo marayo potentiometer
Mashiinka wax lagu qaso wuxuu ku yaalaa meelaha wax lagu tuuro. Waxay isku dari kartaa slurry jalaatada iyo granules miraha isku mid ah xawaare joogto ah.
Hawlgalka Isku-darka Miraha
Guddi Hawleedka Dhammaan badhanka shaqeynaya waxay ku yaalaan qaybta hore, waana sahlan tahay in la shaqeeyo.
Waxaa si toos ah loogu shaqeyn karaa korontada ka dib .Waa mid aad u habboon.
CIP nadiifinta internetka
Nidaamka nadiifinta CIP wuxuu ku bilaaban karaa iyadoo la xakameynayo guddiga hawlgalka, kaas oo hagaajin kara booska u dhexeeya mashiinka quudiyaha iyo qayb isku dhafan sida masaafada asalka ah.
Fruit TM-4000 waxay soo saari kartaa 16 ~ 400L / Saacadii dufcad kasta iyada oo la adeegsanayo fur kala duwan.
Qaybaha Ikhtiyaariga ah
l fur tiro
l qaybaha kale ee dayactirka
walxaha Halbeegga Faallooyin
Quudinta mootada fur 0.75 KW
Gawaarida Mashiinka Mashiinka 0.75 KW
Gawaarida Gawaarida Vane 1.1 KW
Wadarta Awooda 2.75 KW
Quudinta tubada ， dibedda 51 mm 2 "Xarkaha tuubada
Tuubada Dheecaan tern dibadda 51 mm 2 "Xarkaha tuubada
Hore: Taangiga loo yaqaan 'Runjin Jacketed'
Xiga: Runjin © Krunt ™ -Z12 Z12 Mashiinka Buuxinta Rotary Ice Cream
Runjin © Krunt ™ -2000 Mashiinka Isku Darsiga Miraha